Fifanarahana momba ny asa 10 000 nozaraina : hitohy hatramin’ny 2022 ny fandraisana mpampianatra | NewsMada
Fifanarahana momba ny asa 10 000 nozaraina : hitohy hatramin’ny 2022 ny fandraisana mpampianatra
Hitohy hatramin’ny taona 2022 ny fandraisana mpampianatra Fram ho mpiasam-panjakana, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Rabary Paul, teny amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina , omaly. 45 000 sisa ireo mbola tsy voaray ka heverina fa ho tafiditra avokoa izy ireo ao anatin’ny tetikasa teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana (PSE) hatramin’ny taona 2021. Tsy hijanona eo fa handray ireo mpampianatra nahavita fiofanana teny anivon’ny sekoly manokana ny minisitera aorian’izay.
Ny andiany fahefatra 10 000 no nizarana taratasy fifanarahana momba ny asa omaly teny Mahamasina. “Nisy ampahan’ny mpampianatra mbola mila fanamboarana ny antontan-taratasy ka manaraka any aoriana ny fanomezana ny fifanarahana”, hoy ny talen’ny inforamtika sy ny teknolojia vaovao ao amin’ny minisitera, Serge Tsitohara.
Ho fanomezan-danja ny fampianarana sy ny mpampianatra ny handraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana. Eo koa ny fanamaivanana ny vesatra amin’ny ray aman-dreny.
Mialoha ny fandraisana asa, hofanina hatrany ny mpampianatra Fram tafiditra ho mpiasam-panjakana. Mbola hizarana fitaovana enti-mampianatra koa izy ireo.
Ho an’ny taom-pianarana vaovao, mbola hisaraka tsara ny EPP sy ny CEG ary hikarakara fanadinana CEPE ny fanjakana. Fanovana entina kosa ny fampidirana ny teny malagasy ho enti-mampianatra ho an’ny kilasy T1 sy T4. Ho an’ny T4, ampifangaroana ny teny malagasy sy teny frantsay amin’ny fampianarana ny taranja siantifika.